I-Nook GlowLight Plus sele iphakathi kwethu | Zonke iReaders
INook GlowLight Plus sele iphakathi kwethu
UJoaquin Garcia | | Barnes & Noble, I-eReaders
INook GlowLight Plus ligama le-eReader elandelayo ebesithetha ngayo ixesha elide. Ewe, emva kwemifanekiso evuzayo kunye neempazamo kwiwebhu singatsho ukuba iNook GlowLight Plus isemthethweni kwaye iyathengiswa kwiwebhusayithi ye-B & N.
I-eR & Reader entsha ye-B & N ayivezi nto intsha: umboniso we-6 with nge-inki ye-elektroniki, ukuchukumisa, ukhanyise kunye netekhnoloji yeeleta. Ine-dpi engama-300 kwaye ayinakho ukwandiswa kokugcinwa kwangaphakathi. Sonke siqhelene nezi zinto kwaye ii-eReaders ezindala zinazo. Ngoku iNook GlowLight Plus entsha yiyo ukumelana namanzi kunye nokothuka, njengeKobo H2O okanye iTolino Vision 3 HD, ifana nale yokugqibela kunokuba eyokuqala njengoko iscreen siyi-6 ″.
Ixabiso lale fowuni liyabetha njengoko liza kuba lixabiso malunga nama-129 eedola, ixabiso elisezantsi kune-159 ye-euro ebiza iTolino Vision 3 HD kwaye kubonakala ngathi igama iya kuba yiyo kuphela into etshintsha kwezo zi-eReaders.
Kwakhona, i-B & N ayizisusanga i-eReaders zayo ezindala ngokunjalo. I-Nook GlowLight iyaqhubeka nokuthengisa kodwa ngexabiso eliphantsi, kwi- $ 99, Ixabiso eliphezulu ngokuthelekiswa nohlobo olusisiseko kodwa alubi kwi-eReader enjengeNook GlowLight.
Ngoku kuya kufuneka silinde ukuba abantu bayayithanda iNook GlowLight Plus entsha okanye hayi, kuba ithala lencwadi lixhomekeke ikakhulu kwintetho yabantu. Ukuza kuthi ga ngoku iipilisi zabo zibonakala ngathi azifikanga kakuhle kwintengiso, into engakhange yenzeke kwiipilisi zeAmazon, ngaphandle kwento yokuba Ithebhulethi ye-Samsung kunye ne-B & N ingcono kwezobuchwephesha Ukuthetha ngeAmazon.
Nangona kunjalo, ndicinga ukuba le B&N eReader intsha iya kuba nenomdla kwintengiso, ukhetho olwamkelekileyo ngokufanelekileyo okanye ubuncinci yile nto ibonakala kum. Ucinga ntoni ngale eReader? Ungayithenga iNook GlowLight Plus entsha?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Zonke iiReaders » iinkampani » Barnes & Noble » INook GlowLight Plus sele iphakathi kwethu
UAntonio cm sitsho
Ndingayithenga phi eSpain?
Phendula ku-Antonio cm
I-8 intshi Icarus Illumina XL iyafumaneka ngoku kubhukisho
I-8 intshi Icarus Illumina XL iya kukhutshwa ngo-Novemba